COVID-19: igbochi Coronavirus - Nkwụghachi ahụike
Mbido » blog » COVID-19: Mgbochi Coronavirus
Coronaviruses, nke aha ya dị ka Cov, bụ ọtụtụ nje nke nwere ike ibute ma anụmanụ ma mmadụ. N'ime ụmụ mmadụ, ha nwere ike mepụta ụdị ọrịa iku ume dị iche iche, site na oyi na-atụkarị na oke oyi baa (ọrịa akpa ume). Ihe ka ọtụtụ n'ime nje ndị a anaghị arụ ọrụ ma nwee ọgwụgwọ dị. Ọbụna karịa, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ebutewo ụdị coronavirus na ndụ ha, ọ na-abụkarị n'oge ha bụ nwata. Ọ bụ ezie na ha na-adịkarị na oge oyi, dị ka ụbịa na oge oyi, ịnwere ike ijide ha n'oge ọ bụla n'afọ. A na-akpọ Coronaviruses maka okpueze yiri okpueze n’elu ha. Coronaviruses nwere 4 sub subing groupings maara dị ka alpha, beta, gamma, na delta.
Coronaviruses nke mmadụ na-ahụkarị
N'ime afọ iri abụọ gara aga, coronavirus akpatala ntiwapụ atọ nke gụnyere:
SARS (Ọrịa Sakeji Nnukwu Ọrịa): Ọ bụ ọrịa iku ume malitere na China na 2002 ma mesịa gbasaa n'ụwa niile, na-emetụta mmadụ 8000 ma na-akpata ọnwụ 700. Enweghị aha SARS-CoV edebanyela aha na 2004.
MERS (Middle East Respiratory Syndrome): Edere akwụkwọ MERS-CoV mbụ na Saudi Arabia na 2012, na-akpata ikpe 2400 na ọnwụ 800. Ikpe ikpe ikpeazụ mere na Septemba 2019.
COVID-19 (Ọrịa Coronavirus 2019): E kpughere ikpe mbụ na China na njedebe nke 2019. Ka ọ dị ugbu a, ikpe 117,000 ekwuola na ha edebanyela ọnwụ 4257. Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) na Njikwa Ọrịa Ọrịa (CDC) na-eguzobe iwu nchebe na mkpọsa mgbochi.
COVID-19 noro coronavirus bụ ọrịa iku ume nke na - esite na obere oyi nkịtị ruo oyi oyi nke na - egbu ndụ. Achọpụtara ya na Wuhan, China na Disemba afọ 2019 na ntiwapụ ọ wee gbasaa n'ụwa niile.
A na-eche na mmalite nke coronavirus a sitere na anụmanụ. Investigationsfọdụ nyocha na-egosi na ọ sitere n'ajọ agwọ, ebe ndị ọzọ na-ekwu na o sitere na ụsụ. Nke ọ bụla, a na-ebunye ya ụmụ mmadụ. Canmụ mmadụ nwere ike ibunye ndị ọzọ nje ahụ site na ịmịara akụkụ iku ume (ụkwara na snee) na anya 6 mita. Nwekwara ike bute oria ma ọ bụrụ na emetụ n’elu mmiri nwere ọrịa nke onye butere ọrịa aka (osisa, imi imi, wdg).
Ọ bụ nnukwu ọrịa iku ume na-ebute ọrịa ndị a: ahụ ọkụ, ụkwara, imi ala, imi imi, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, ahụ erughị ala na ume iku ume. Mgbaàmà nwere ike ịdị nwayọọ, agafeghị oke, ma ọ bụ sie ike. Ọ bụrụ na agwọghị ya nke ọma, ọ nwere ike ibute ọrịa mgbu ọria, ọdịda dara ada na ọnwụ.
Ụzọ kacha mma iji gbochie COVID-19 ga-abụ iyi ihe mkpuchi, dọọ anya gị, yana nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 na ogbunigwe nkwalite. Gbalịa ka ị zere ikpughe ruo ókè i nwere ike.
N'ozuzu, a na-atụ aro mgbe niile ịgbaso usoro iri nri / ibi ndụ dị mma maka ịdịmma na ahụike gị dum.
Lelee vidio a dị mkpa ịmụtakwu banyere mkpa nri superfood maka ahụike gị dum.
Gbaa mbọ hụ na ịgbaso ntuziaka ndị a sitere na CDC. CDC akwadola usoro nchekwa ndị a kwa ụbọchị iji gbochie mgbasa nke ọrịa a:
Soro ndị ọrịa na-akpachi anya.
Zere imetụ anya gị, imi na ọnụ gị aka.
Nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ma jiri ihu ihu iji gbochie gị ịgbasa ndị ọzọ.
Kpuchie ya imi na ọnụ gị site na iji mkpofu diski mgbe ị na-ọkpọ ma ọ bụ ịmịchaa ma tụfuo ya na ahịhịa. Nwere ike iji aka gị kpuchie ọnụ gị ma ọ bụrụ na ịnweghị aka anụ ahụ.
Jiri mmiri na ncha sachaa aka gị mgbe ọ dịkarịa ala iri abụọ, ọkachasị mgbe ị gachara ụlọ ịsa ahụ, tupu i rie nri, na mgbe ụkwara ma ọ bụ ịsụsụ gwụrụ. Ọ bụrụ n’inweghị mmiri na ncha n ’oge a, ịnwere ike iji ihe nchacha aka nke dịkarịa ala 20% mmanya. Must ga-akacharịrị aka gị ma ọ bụrụ na ha ruru unyi.
Ghichaa ma mekwaa ihe ndị ahụ etere aka na nso nso a. Nwere ike iji mmiri nhicha ma ọ bụ akwa nhicha.
Organizationstù ahụike na-atụ aro izere njem ndị na-adịghị mkpa na China ma ọ bụ South Korea.
Ọ bụrụ n’ịga mba ọ bụla ma nwee ike ibute onye butere ọrịa ahụ, a ga-enyocha ya ụbọchị iri na anọ sochirinụ ma ọ bụrụ na mgbaama ahụ amalite ịpụta.
Dabere nwayọ ma nwaa ịgbaso ntuziaka iji belata ihe butere ọrịa.